Tue, Sep 22, 2020 at 4:56pm
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ६ सय ४७ जनामा कोरोना पुष्टि, एक जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# मंगलबार देशभर १ हजार ३ सय ५६ काेराेना संक्रमित थपिए #आहा खबर# संवैधानिक निकायमा तत्काल पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देशन #आहा खबर# चुनाव चिन्ह 'गाई' छाड्नु परेपछि पिडामा कमल थापा #आहा खबर# सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण गर्ने सरकारकाे तयारी #आहा खबर# काठमाडाैं ल्याइयाे डा. गोविन्द केसीलाई, जटिल बन्दै स्वास्थ्य अवस्था #आहा खबर# बालुवाटारमा शुरु भयाे नेकपा सचिवालय बैठक #आहा खबर# दीपिका पादुकोणको नाम पनि मुछियो बलिउड ड्रग्स कनेक्सनमा #आहा खबर# त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेविसंघका तीन कार्यकर्ता पक्राउ #आहा खबर# एकता महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने राप्रपाको निर्णय, चुनाव चिन्ह हलो, झण्डामा गाई #आहा खबर# डा भोला रिजाल दम्पती काेराेना संक्रमणमुक्त #आहा खबर# केन्द्रिय सदस्यको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि कति खर्च गर्दैछ नेकपा ? #आहा खबर# चीनको एजेन्ट भन्दै न्युयाेर्कमा एक अमेरिकी प्रहरी पक्राउ #आहा खबर# आज एकैदिन १७ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ? #आहा खबर# सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म ५ हजार ७ सय ५१ जना काेराेना संक्रमण मुक्त #आहा खबर#
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा एक सिटमा एक जना मात्र बसी यात्रा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले यात्रा गर्दा झ्याल खुला राख्ने, बसमा चढ्दा ओर्लदा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र कार्यालयभित्र जाँदा अनिवार्यरुपमा साबुन पानीले हात धुनसमेत अनुरोध गरे । “अत्यावश्यक कामका लागि घरबाहिर निस्कनै पर्दछ,..
काठमाडौं, ४ असोज । आन्तरिक हवाइ उडानकाे भाडा नबढ्ने भएकाे छ । सरकारले भाडा बढाएर ५० प्रतिशत मात्र सिटमा यात्रु बोक्न वायुसेवा कम्पनीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, वायुसेवा कम्पनीले भने भाडा नबढाउने तर पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउनु पर्ने अडान राखेका थिए । सोहीअनुसार साविकको तुलनामा हवाई भाडा बढी नहुने वायुसेवा संचालक संघका सदस्य प्रज्वल थापाले बताए । यस्तै वायुसेवा कम्पनीहरुले सबै..
काठमाडौं, २ असाेज । नेपाल सरकारले जनकपुर–जयनगर रूटमा सञ्चालन गर्न भारतसँग किनेको रेल जनकपुर आइपुगेकाे छ । जयनगरबाट हिँडेर शुक्रबार अपराह्‍न २ बजे जनकपुर आइपुगेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध गराएको भिडियोमा रेल हेर्न आइपुगेका सर्वसाधारणको ठूलो भिड देख्‍न सकिन्छ । जनकपुर-जयनगर रेलको लिक न्यारोगेजबाट ब्रोडगेज बनाएपछि रेल पनि सोहीअनुसारको खरिद गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेललाई..
काठमाडाैं, १ असाेज । लकडाउनका कारण झण्डै ६ महिनादेखि बन्द लामो दूरीका सवारीसाधन आज 'बिहीबार' बाट खुलेका छन् । यातायात व्यवसायी र चालक महासंघको संयुक्त कार्यदलले हिजाे विज्ञप्ति जारी सबैलाई आजदेखि लामो दूरीका गाडी चलाउन अनुरोध गरेकाे हाे । यस्तै सबै चालक, सहचालक र यात्रुलाई सवारीसाधनमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। चालक, सहचालकले मास्क, पञ्जा, सेनिटाइजर र सहचालकले फेस भाइजर अनिवार्य..
काठमाडौं, ३० भदाै । असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायात सञ्चालन हुने भएका छन् । सरकारले असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायातका साधन सुचारु गर्न दिने निर्णय गरेको हाे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैतदेखि बन्द रहेका आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायात असोज ५ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार..
काठमाडौं, २७ भदाै । असोज १ देखि लामो दूरीका यातायत सञ्चालन गर्न दिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यातायात व्यवसायी तथा मजदूरहरुले असोज १ गतेदेखि सबै यात्रुबाहक बस चलाउन दिनुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा तीन वटा मजदूर संघको संयुक्त कार्यदलले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई मन्त्रालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। ११ लाख भन्दा बढी..
काठमाडाैं, २६ भदाै । असोज १५ गतेदेखि देशभरका विमानस्थलमा आन्तरिक उडान खुला हुने भएका छन् । सरकारले १५ असोजदेखि देशभरका विमानस्थलमा आन्तरिक उडान खोल्ने तयारी गरेको हाे। तर, पर्यटन मन्त्रालयले भने १ असोजदेखि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उडान खोल्नुपर्ने प्रस्ताव सिसिएमसीमा गरेको छ । एयरलाइन्स कम्पनीहरूले भने १ असोजदेखि उडान नखोले आन्दोलन गर्ने र कम्पनीको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा..
काठमाडाैं, २५ भदाै । निषेधाज्ञा केहि खुकुलाे गरी सवारीमा जाेर-बिजाेर प्रणाली लागु गरिए पनि भक्तपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा राेक लगाएकाे छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र भदाै ३१ गतेसम्मका लागि सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरिएको मेयर सुनिल प्रजापतिले बताएका हुन् । उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाका बीच बिहीबारदेखि १६ जनाभन्दा बढी सिटका गाडीलाई जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेका थिए। तर, मेयर प्रजापतिको अध्यक्षतामा भक्तपुर नगरभित्रका यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग..
काठमाडौं, २५ भदाै । उपत्यका बाहिर जाने सवारी सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्लाको सिफारिस अनिवार्य भएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सवारी सहजीकरणका सम्बन्धमा सिफारिस अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएकाे हाे । जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ-‘सवारी सहजीकरणको लागि तोकिएको निविदेश, अत्यावश्यक कामको प्रयोजन स्पष्ट खुल्ने कागजात साथै जाने गन्तव्य जिल्ला प्रशासन कार्यलयको अनुमति पत्र तथा सम्बनिधत गन्तव्य स्थानको..
काठमाडाैं, २५ भदाै । आजबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि नै चहलपहल बढेको छ। आजबाट तीन साता लामो कडा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपछि चहलपहल हिजोअस्तीको तुलनामा निकै बढेको हो। उपत्यकाको सडकमा बिहीबार बिहानैदेखि सवारी साधनको चाप बढेको छ भने पसल पनि सञ्चालनमा आएका छन्। आजबाट निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्न दिइएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले बताए। एसएसपी ढकालका..
काठमाडाैं, २० भदाै । अब टीभीएसका बाइक नेपालमै उत्पादन हुने भएका छन् । जगदम्बा मोटर्सले १ अर्बको लगानीमा टीभीएसका बाइक नेपालमै उत्पादन गर्न सुरु गरेको हाे। सिमरामा प्लान्ट स्थापना गरी कम्पनीले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको हो। नेपालमा आधिकारिकरुपमा टीभीएसका बाइक तथा स्कुटर बिक्रीवितरण गर्दै आएको व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोर्टसले प्लान्टमा लगानी गरेको हो। जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा अत्यधिक रुचाइएको अपाचे १६० को बाइकबाट उत्पादन गर्दै छ।..
दाेहा, १४ भदाै । कोरोना भाइरसको महामारीले कतारमा लगाइएका प्रतिबन्ध क्रमिकरूपमा हटाइदै लगिएको छ । सेप्टेम्बर १ देखि तेस्रो चरणका प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरिसकेको कतार सरकारले सोही दिन देखि मेट्रो रेलसहित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । तर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निशर्त भने हुने छैन । कतारको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा ३० प्रतिसत यात्रु क्षमता राखेर..
काठमाडाै, ३२ साउन। साेमबारदेखि कीर्तिपुर नगरपालिका भित्र सार्वजनिक यातायात संचालन नहुने भएकाे छ। नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षज्युहरुको विशेष उपस्थितीमा आइतबार बसेकाे बैठकले तिब्र गतिमा लैलिरहेकाे काेराेना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यसकाे नियन्त्रण एवं न्युनिकरण गर्न साे निर्णय गरेकाे जनाएकाे छ । यस्तै उक्त बैठकले भदाै १ देखि ९ गतेसम्म कीर्तिपुरका औषधि पसल बाहेकका सम्पुर्ण पसल/ बजार बिहान ७ बजेदेखि बिहान ११ बजे सम्म मात्र खोल्ने निर्णय समेत..
काठमाडौं, ३२ साउन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको ठेकेदार कम्पनीलाई नै रेलमार्गको ठेक्का दिने तयारी भएकाे छ । रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलवेको १०६ किलोमिटर ट्रयाक–बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई समेत ठेक्का दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको हो । उक्त कम्पनीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियाे भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन..
काठमाडाैं, २४ साउन । सरकारले १ भदौ देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा लामो दुरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेर तयारी थालेपनि कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि अन्योल थपिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उडान खोल्ने–नखोल्ने विषयको अधिकार पर्यटन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा उच्चस्तरीय समिति सिसिएमसीलाई दिएको छ । तर, समितिले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘हामी थोरै भए पनि उडान खोल्नुपर्छ..
काठमाडौं, २२ साउन। काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लाहरुमा आजबाट सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर लागु भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले फेरि जोरबिजोरको आधारमा सवारी साधन सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र दुई सय जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा जोर–बिजोर लागु गरिएको छ । आज साउन २२ गते जोर गते रहेकाले जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी..
काठमाडौं, २१ साउन । सरकारले पुन: काठमाडाैंसहित केहि जिल्लाका सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकासहित २ सयभन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमण केस भएका जिल्लामा सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको हाे । गृह मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जोरबिजोर लागू भएका स्थानमा बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन बन्द गर्ने निर्णय भएको पनि जनाएको छ ।उपत्यका प्रवेश..
काठमाडाैं, १३ साउन । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन २ महिनापछि खुला हुने भएको छ । तत्काल नयाँ आवेदन खुला गर्दा सेवाग्राहीको भीड बढेर र कोरोना (कोभिड-१९) सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएकाले २ महिनापछि मात्र खुला गर्ने योजना रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘मुख्य त कोरोनाकै कारण तत्काल खुला नगरिने भएको हो..
काठमाडाैं, ९ साउन । मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डमा सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । अविरल वर्षापछि डाइभर्सन राखी सञ्चालन गरिएको सडक पुनः अवरुद्ध भएपछि २ दिनका लागि ठूला सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिए । बैकल्पिक मार्गमा सवारी साधन फसेर पुनः राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्राभेल गर्ने कार्य भइरहेकाले सवारी रोक्नु परेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी..
काठमाडाैं, ६ साउन । बाढीपहिरोको कारण देशभरका सडक अवरुद्ध भएका छन्। राजधानी काठमाडौं आवात जावत गर्ने प्रमुख सडक पृथ्वी राजमार्ग सोमबार बिहानैदेखि अवरुद्ध छ। मुग्लीन-नारायणगढ सडक खण्डमा पर्ने धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित मौवाखोलाको पुल बाढीले भत्किएको छ। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने चितवन र धादिङका ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध छ। मौवाखोलामा बेलिब्रिज राखेर सडक सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरिएको सडक विभागले जनाएको छ।..
चितवन, ५ साउन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ६ चारकिलो नजिकै पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । अविरल वर्षापछि सोमबार बिहान सडकमा ठूलो पहिरो खसेपछि सवारी आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार हालसम्म पहिरो खसिरहेकोले तत्काल पहिरो हटाउन कठिनाइ भएको छ । पानी पर्न र पहिरो झर्न रोकिएपछि मात्रै पहिरो..
काठमाडौं। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सोमबारदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको जनाएको छ। महासंघले यातायात व्यवस्था विभागसँग नियमित वार्ता र छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म निर्णयमा नपुगिएको जनाएको हो। सरकारले गत असार २३ मा छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको निर्णयपछि व्यवसायी र मजदूर संगठन नियमित विभागसँग छलफल गरिरहेका छन्। मजदूरको कोरोना बीमा र चालक, सहचालक र यात्रुको स्वास्थ्य..
काठमाडाैं, ३ साउन। यातायात व्यवसायीले केही दिनभित्रै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले आफूहरुको धेरैजसो माग सम्बाधेन गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी चलाउने तयारी थालेको जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीले बैंकको किस्ता सार्नुपर्ने, सुहलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जा दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए । मौद्रिक नीतिले माग सम्बोधन गरेपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले गत असार..
काठमाडौं, ३१ असार । साझा यातायातले बिहीबारबाट सेवा थाल्ने भएको छ । साझाका २६ वटा बसले ८ वटा रुटमा सेवा दिने साझाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्दराज पाण्डेयले बताए। संकटको समय भएकाले सेवालाई प्राथमिकता दिएर पुराना सबै रुटमा बस चलाउन लागिएको उनले बताए । गोदावरी, थानकोट, लामाटार, बालाजु, सूर्यविनायकसहित साझा चल्दै आएका सबै रुटमा बस चल्नेछन् । साझाले सरकारले तोकेअनुसार साविककोभन्दा ५० प्रतिशत बढी..
सोमबार, आषाढ २९, २०७७ साल
अन्तत: तत्काल सञ्‍चालन नहुने सार्वजनिक यातायात
शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ साल
Results 1298: You are at page 1 of 44